Typ विशिष्ट चिनियाँ स्मृति चिन्ह: उपहार विचारहरू यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | चीन, सामान्य, एशिया यात्रा
चीन यो एक देश हो जुन मैले लामो समयदेखि माया गरें। यो प्राचीन, विशेष हो र एशियाको यस भागमा यो संस्कृतिको पालना हो किनभने यसको प्रभाव शक्तिशाली छ। आज चीन एक मान्यता प्राप्त राक्षस हो, तर म विश्वास गर्दछु कि यो त्यस्तो हुन कहिल्यै रोकेन।
यो एक विशिष्ट, विशेष देश, आफैंमा एक ब्रह्माण्ड हो। यो छ विशाल र बहुसांस्कृतिक र शताब्दीहरु को बृद्धि एक धनी संस्कृति को एक उत्पन्न गरेको छ। राम्रो कुरा के हो कि स्मृति चिन्हको रूपमा हामी त्यो पुर्खा संस्कृतिको घर लिन सक्दछौं, त्यसैले म यहाँ छु चीन बाट सबै भन्दा राम्रो स्मृति चिन्ह को एक सूची, ती तपाईंको सूटकेसमा हराउन सक्दैन।
1 चिनियाँ जेड
2 चिनियाँ रेशम
3 चीन माटोका भाँडो
4 चिनियाँ च k्गा
5 चिनियाँ लालटेन
7 चिनियाँ लोक खेलौना
जेड एक हो कडा खनिज जुन हरियो वा सेतो हुन सक्छ, म्याग्नेशियम र क्याल्शियम सिलिकेटको संयोजन। चिनियाँहरूले यसमा हजारौं बर्षदेखि काम गर्दै आएका छन् र तिनीहरूको संस्कृतिमा इणका संस्कृतिमा सुन भनेको के हो, उदाहरणका लागि।
जेड यो आध्यात्मिक, नैतिकता, नैतिकता, योग्यता र मर्यादासँग सम्बन्धित छ र यही कारणले यो अन्त्येष्टि वा धार्मिक संस्कारमा सामान्य थियो। समयको साथसाथै यसले अन्य प्रयोगहरू र सजावटका वस्तुहरू र दैनिक र व्यक्तिगत प्रयोगको जेड देखा पर्‍यो: बक्स, कंघी, कंघी, गहना।
जेडको कला भित्र त्यहाँ केहि बान्की छन्: बाँस एक दयालु व्यवहार, प्रशंसक परोपकार प्रतिनिधित्व गर्दछ, हिरण उच्च पदस्थ अधिकारीहरु द्वारा प्रयोग गरिएको थियो, बतख प्रतिनिधित्व प्रेम र पीच दीर्घायु, उदाहरणका लागि। सुन र रत्नहरू अधिक मूल्यवान हुन सक्छन्, तर चिनियाँहरूको लागि, जेडको आत्मा छ.
कुनै जेड आईटम खरीद गर्दा तपाईले गर्नु पर्छ पत्थरको चमक, चमक, र color्ग, र यो कसरी कॉम्प्याक्ट छ विचार गर्नुहोस्। यदि तपाईं हावा बुलबुले देख्नुहुन्छ भने यो वास्तविक जेड होइन र यदि त्यहाँ दराराहरू छन् भने यो कम मूल्यको छ। र हो, जेडको ख्याल गर्नुपर्छ: कुनै बम्पहरू, कुनै धुलो, कुनै अत्तर र रसायनहरू किनकि यसले चमकलाई असर गर्दछ र धमामा लामो समयको लागि हो।
शताब्दीयौंदेखि रेशम बहुमूल्य वस्तु भएको छ। गँड्यौलाले यसको मृत्यु नभएसम्म रेसम उत्पादन गर्दछ, अनुमानित १ meters मिटर मात्र २ meters दिनमा। त्यसकारण मूल रेशम महँगो छ। चिनियाँहरूले हान वंशको समयमा रेशमको काम गर्न थाल्छन् र प्रसिद्ध रेशम रोड ती वर्षहरु बाट मिति, चीन मा उत्पन्न भएको व्यापार मार्ग यूरोप पुगे।
चिनियाँ रेशम किन्दा, सबैभन्दा नरम खोजी गर्नुहोस् तपाईं सक्नुहुन्छ। एक प्रशिक्षित आँखाले नक्कलीबाट वास्तविक रेशमलाई छुट्याउँछ तर मूलतः तपाइँ सावधान हुनुपर्दछ कि थ्रेड पातलो र लामो, मध्यम प्रतिरोधको, चमकको साथ तर धेरै धेरै छैन।
तपाईं किन्न सक्नुहुन्छ लुगा, रुमाल, बक्सs रेशम, जुत्तामा कढ़ाई.
चीन माटोका भाँडो
सिल्क रोड हुँदै यूरोप पुग्न पहिलो चिनियाँ शिल्प मध्ये एक निश्चित रूपमा यसको पोर्सिलेन थियो। चिनियाँ पोर्सिलेन धनी वर्गमा जन्म भएको थियो तर यसको कारण द्रुत तल्लो वर्गमा फैलियो शक्ति र स्थायित्व.
सबै प्रकारको भाँडा, चिया सेट, विभिन्न प्रयोगका लागि बक्सहरू, वाद्ययन्त्रहरू र अधिक धेरै वस्तुहरू बनाइएको र चीनी मिट्टीका बरदान बाट बनेका थिए। सायद यस कलाको सबैभन्दा प्रख्यात अवधि युआन राजवंशको समयमा बाँचिरहेको थियो, १th औं र १ XNUMX औं शताब्दीको बीचमा हो क्लासिक निलो र सेतो पोर्सिलेन। तर प्रत्येक राजवंशले यस कलामा आफ्नै शैली ल्यायो।
तपाईं कुनै पनि बजार वा किनमेल केन्द्रहरू र साना बक्सहरूमा १००% चिनियाँ पोर्सिलेन खरीद गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि महिलाको लागि महान स्मृति चिन्ह.
चिनियाँ च k्गा
पतंग, पतंग, जस्तो कि तपाईं तिनीहरूलाई भन्न चाहानुहुन्छ, चीनमा तिनीहरू चिनिन्छन् झियुआन y ती सब भन्दा पुरानो शिल्प हुन् किनकि तिनीहरूको उपस्थिति ई.पू. century शताब्दीमा देखिन्छ। पतंगको विभिन्न प्रयोगहरू थिए, सैन्य पनि, तर तिनीहरू सबै सामाजिक वर्गहरूमा लोकप्रिय भए।
मूल चिनियाँ पतंगहरू हुन् बाँस र कागजको साथ बनाईएको र ती ड्र्यागन, पुतली वा कीरा जस्ता आकारका हुन सक्छन्। आधुनिकसँग अन्य आकारहरू छन् र या त यी तत्वहरू वा प्लास्टिक र सिंथेटिक फाइबरहरूको साथ बनेको छ तर तिनीहरू पनि राम्रा छन्।
कागज लालटेनले भरिएको चिनियाँ रेस्टुरेन्टमा को छैन? तिनीहरू उत्पत्ति भएको धेरै लामो समय अघि पहिलो र तेस्रो शताब्दीहरू बीच र तिनीहरू केवल बत्तीहरू थिए ती समयमा
एक चिनियाँ लालटिन कागज, बाँस, काठ, रेशम, कागजबाट बनाइन्छ। उनीहरूसँग धार्मिक धार्मिक प्रयोग थियो र समयको साथ ती व्यक्तिहरूले उनीहरूलाई विभिन्न क्षणहरू हाइलाइट गर्नका लागि प्रयोग गर्‍यो, साथै प्रकाश दिनका लागि।
अन्य आधुनिक प्रकाश प्रविधिको विकासको साथ, चिनियाँ लालटेन मात्र सजावटी भयो। त्यहाँ कुनै क्लासिक स्मारिका छैन। हो वास्तवमा, त्यहाँ विभिन्न आकारका फ्ल्यासलाइटहरू छन्, बेलुनहरू जस्तै गोलाकार, विस्तारित, अजगर जस्तै आकार। तिनीहरू जताततै बेचिन्छन्।
क्लोइजन एक पुरानो हो हनीकम्ब ग्लेजि technique्ग प्रविधी धातु वस्तुहरू सजाउन प्रयोग। यो तेह्रौं शताब्दीमा बेइजि inमा शुरु भयो र कांस्य वस्तुहरू काम गरिए। प्रविधिको समयसँगै सुधार भयो र यो धेरै शुद्ध कला भयो।
यो प्रविधि हो गाह्रो र धेरै परिष्कृत: पोर्सिलेन, कांस्य, चित्रकला र मूर्तिकला इनभ्वाइस संयोजन गर्नुहोस्। आज ती बेचिएका छन् भाँडा, फूलदान, फव्वारा र गहना क्लोइसिन र चीनको विभिन्न एक ठूलो निर्यातकर्ता हो।
क्लोईस्नेन किन्नका लागि दुई राम्रा ठाउँहरू लिउलीचांग स्ट्रिट र बेइजि'sको वाang्गफुजिing दाजी शपिंग स्ट्रीट हो।.
चिनियाँ लोक खेलौना
चिनियाँहरूले सँधै खेलौना बनाउँदछन् र त्यहाँ उनीहरूको बनाउने काममा विभिन्न कला समावेश छन्। तिनीहरू राम्रो स्मृति चिन्ह हुन् किनकि थप रूपमा तिनीहरू सामान्यतया सस्तो वस्तु हुन्। त्यहाँ छन् ढु stone्गा, काठ, पोर्सिलेन, मोम, सिरेमिक.
त्यहाँ वस्तुहरू छन् जुन महिलाले परम्परागत रूपमा कपडाहरू र फीताका साथ बनाउँदछन्, जुन फलस्वरूप पुतली, फूल वा जनावरहरूसँग सजावट गर्दछ जुन सामान्यतया बच्चाहरूलाई दिइन्छ। त्यहाँ छन् चिनियाँ ओपेरा वा चिनियाँ धर्म र पौराणिक कथा सम्बन्धित छ, त्यहाँ क्लासिक छन् रातो गाँठो, लास संगीत बाकस, the कठपुतली र आज, सबै आकार र र ofको भरिएको खेलौनाको रूपमा।
चीनका यी स्मृति चिन्हहरू बाहेक अरू कोही छन् प्रशंसकहरू, परम्परागत टिकटहरू, चिनियाँ औषधि वा कम्युनिष्ट शासनबाट यादगार। सत्य यो हो कि चीन एक महान् बजार हो त्यसैले म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाई बढि सुटकेस वा ब्याकप्याक बोक्न तयार हुनुहोस् तपाईका सबै खरीदहरूको साथ। यो सस्तो छ, तपाईं ह्यागल गर्न सक्नुहुन्छ, र स्मरणार्थीहरू किनमेल गर्नेहरूको लागि यो स्वर्ग हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » एशिया यात्रा » चीन » चीनको विशिष्ट स्मृति चिन्ह
जापानमा पाँच अनुभव जुन तपाईंले मिस गर्नु हुँदैन